GO'AAN: Mucjisada Barcelona U Soo Baxay Ee Ansu Fati Oo Go'aan Ka Gaadhay Xulka Uu Matali Doono-Portugal, Spain Mise Guinea-Bissau? - Gool24.Net
GO’AAN: Mucjisada Barcelona U Soo Baxay Ee Ansu Fati Oo Go’aan Ka Gaadhay Xulka Uu Matali Doono-Portugal, Spain Mise Guinea-Bissau?
Magaca Ansu Fati waxa uu noqday mid si lama filaan ah aduunka oo dhan ugu faafay muddo kooban kadib markii uu si lama filaan ah uga soo muuqday tababarka kooxda kowaad ee Barcelona balse uu Valverde aduunka kaga yaabsaday in uu soo safay isaga oo 16 sano jir ah.
Ansu Fati waxa uu markiiba noqday mid abaalkii Valverde soo guday isla markaana labada todobaad gudahood aduunka oo dhan isku baray. Ansu Fati waxa uu noqday xidigii abid ugu da’da yaraa ee Barcelona gool uga dhaliyay La Liga.
Ansu Fati waxa uu xaq u leeyahay in uu u ciyaari karo saddex xul qaran oo kala duwan kuwaas oo kala ah dalka Afrikada galbeed ku yaal ee Guinea-Bissau, Portugal iyo Spain oo uu siyaabo kala duwan xaq ugu yeeshay.
Ugu horayn Ansu Fati waxa uu October 31,2000 kii uu ku dhashay caasimada dalka Guinea-Bissau ee Bissau laakiin waxay isaga iyo waalidkii u guureen dalka Portugal balse waxay uga sii gudbeen dalka ay hadda degan yihiin ee Spain.
Waxayna arintani keentay in Fati uu matali karo xulalka Guinea-Bissau, Portugal iyo Spain laakiin waxa uu hadda shaaciyay xulka uu matali doono mustaqbalkiisa ciyaareed.
Ansu Fati ayaa go’aan ku gaadhay in uu xulka qaranka Spain u ciyaaro waxayna farxad wayn u tahay xidhiidhka kubbada cagta Spain oo haddaba ka shaqayn doona sidii Fati iyo aabihii farta looga saari lahaa baasaaboorka dalka Spain.
16 sano jirkan aadka loo qiimeeyo ee Ansu Fati ayaa isaga oo go’aanka xulka uu waayihiisa ciyaareed u hibeeyay ka hadlaya waxa uu yidhi: “Anigu waxaan doonayaa in aan Spain u ciyaaro”.
Ansu Fati ayaa xulka qaranka da’yarta Spain ee U17 waxa uu isla bisha soo socota ku matali karaa koobka aduunka da’yarta oo Brazil ka socon doona October 26, 2019 ilaa November 17,2019, waxayna hadda xidhiidhka kubbada cagta Spain u baahan yihiin in ay sharci ahaan u caawiyaan.
Ansu Fati waa xidig isaga oo 16 sano jir ah lacagta heshiiskiisa Barcelona lagu burburin karo laga dhigay 91 milyan yuro, waxayna muujinaysaa heerka aaminaada maamulka Barca ay xidigan ugu kalsoon yihiin.
Inkasta oo Ansu Fati xili ciyaareedkan loo soo dalacsiiyay kooxda Barca B, haddana Valverde ayaa isaga oo aan Fati u safan kooxda heerka labaad waxa uu u soo dalacsiiyay kooxda kowaad oo uu haddaba ka tirsan yahay.
Abdihakiim shimaali says:
Marka hore asc 🙋‍ marlabad ninkan fati ladhaho Maha 16 jir eee waa 19 jir waayo waakan 2000 dhashay marka halkuu 16 ka noqonayaa